Taariikhda Kacdoonka Suufiyadda Soomaaliya iyo Damacooda Siyaasadeed!! – Goobjoog News
Qabsashada Ahlu-sunna Axaddii ee magaalada Dhuusamareeb kadib, Waxaa soo ifbaxay su’aalo badan oo ku saabsan Damaca kooxdan iyo hankooda siyaasadeed, hadaba waxaan halkan kusoo gudbin doonaa wax walba oo ku saabsan kacdoodanka Suufiyada Soomaaliya.
Waa Maxay Suufiyada?
Cilmiga Tasu-wufka waa Dariiqad u kala baxda Dariiqooyin: Sidaa Qaadiriya, Saalixiya, Axmadiya iyo Mowliidiya, waa Waddo uu Aduunku usii marayo Rabigiisa, waxay leeyihiin Culumo Caan ah sida Sheikh Cabdi Qaadir Jiilaani, Xasan Al-Basri iyo Imaam Al-Nawawi.
Suufiyada waxaa ay taageereen midowga Maxaakiimta Islaamiga iyo dagaalkii looga soo horjeeday hogaamiye kooxeedka Muqdisho 2006-dii, laakin koox hubeysan ma aheyn.
Suufiyadu waxay ilko yeelatay oo qoryo qaateen 2009-kii, Xiligaas oo Muqdisho iyo koofurta Soomaaliya ay la wareegeen Islaamiyiinta kasoo horjeeda fikirka Suufiyada, xitaa waxaa la burburiyay Qubuuro ay u siyaaro tagi jireen.
Maamulka Ahlu-sunna waxaa uu ka mid ahaa kooxihii ka qeyb galay 24- December 2011 Shirkii Garoowe, Waxaa shirkan isugu yimid Dowaladda KMG, Puntland, Galmudug iyo Ahlu Sunna, shir afar cisho socday iyo shirkii kale ee 18 Febraayo 2012 Garoowe 2 oo Road map la isku afgartay in Federaal wax lagu saleeyo, Sheekh Shariif oo shirka xiray ayaa sheegay in KMG laga baxay.
Bishii December 2014-kii ilaa Febraayo 2015-kii, waxaa dagaal uu Guriceel ku dhex maray Ahlu-sunna iyo Dowladda Federaalka, ugu dameyntii magaalada waxaa magaalada tagay Wafdiga Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya.
Hadda waxaa Cadaado ka socda shir maamul looga sameynayo gobolada dhexe (Mudug iyo Galgaduud), shirka waxaa uu galay wajiga labaad, waxaa lagu wadaa in natiijada shirka ay meesha ka saarto Maamulada halkaas ka jiro oo Ahlu-sunna ay ka mid tahay.
June 7, 2015: Waxaa dagaal aan dhiig ku daadan Magaalada Dhuuso Mareeb kula wareegay maamulka Ahlu-sunna, lama oga sababta.
Waa sidee Mustaqbalka Suufiyadda Hubeysan ee Soomaaliya?